Google My Business: Hagaha Dutchtown (Qaybta Labaad) • DutchtownSTL.org
Google My Business Qaybta Labaad: Tilmaamaha Dutchtown ee Ganacsiyada
In qayb ka mid ah Tilmaamaha Dutchtown ee Google My Business, waxaan tusnay milkiilayaasha meheradaha yaryar sida loogala wareego liisaskooda Google. Maalmahan qof kastaa wuxuu adeegsadaa Google si uu u helo dukaamo, makhaayado, adeegyo, iyo wax kasta oo kale. Maareynta astaanta ganacsigaaga ee Google waa mid muhiim u ah sawirada macaamiisha.
Ganacsiga Google waa aaladda aad u isticmaasho inaad ku maamusho astaantaada. Marka lagu daro bixinta macluumaadka aasaasiga ah sida cinwaankaaga, saacadaha shaqada, iyo macluumaadka xiriirka, Google My Business waxay bixisaa qalab qalab ah oo kaa caawinaya inaad sare u qaaddo meheraddaada oo aad gaarto macaamiil badan
Qeybta labaad ee hagitaankeena, waxaan ka gudbi doonnaa waxyaabaha aasaasiga u ah dejinta astaantaada oo waxaan ku dhex quusaynaa qaar ka mid ah astaamaha horumarsan ee Google My Business. Waxaan sidoo kale ku soo bandhigi doonaa talooyin waxtar leh oo ku saabsan ilaalinta astaantaada iyo sii wadista macaamiisha hadda iyo kuwa mustaqbalka
Tilmaamaha Fiidiyowga Ganacsi ee Google Qaybtii Labaad
Mar labaad, deggane Dutchtown iyo milkiilaha ganacsiga Janessa West ayaa kuu noqon doonta hage dalxiis. Raac tilmaamaha iyo tabaha si aad uga dhigto astaanta ganacsigaaga Google mid muuqda.
Waxaad ka heli kartaa fiidiyaha qayb ka mid ah tilmaamahayaga Google My Business ku saabsan DutchtownSTL YouTube Channel.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah: Hormoodka Google My Business Features
Tallaabadeennii ugu dambaysay ee tilmaamaha tallaabada ahayd, waxaan u samaynay astaan ​​muuqaal ah Dukaanka Cunnada fudud ee Koonfurta Side. Dhowr maalmood gudahood, dukaankii cuntada fudud ayaa ka soo muuqday raadinta Google iyo Khariidadaha Google. (Maaddaama tusaalaheennu aanu ahayn ganacsi dhab ah, waxaan ku calaamadinnay dukaanka cunnada fudud inuu si ku meel gaar ah u xiran yahay.)
Haddii aad ka raadsato “kaydinta habboon” ee Khariidadaha Google, waxaad arki doontaa Dukaanka Kooban ee Koonfurta oo ka soo baxa khariiddada iyo natiijooyinka ku taxan dhinac-geesta.
Marka xitaa dadaal aasaasi ah, waxaan awoodnay inaan hubinno in ganacsigeennu ku qoran yahay Google iyo in macluumaadka ay heli karaan macaamiisha ay sax ahaayeen.
Markaad dejiso astaantaada kadib markaad raacdo hagaheena hore, Google waxaa laga yaabaa inay kuu soo dirtay kaarka boostada oo leh nambarka xaqiijinta. Tan markasta looma baahna, laakiin duruufaha qaarkood - gaar ahaan haddii aad sheeganaysid ganacsi la aasaasay oo Google horay u liis garaysay - waxaa laga yaabaa inaad xaqiijiso lahaanshahaaga ganacsi. Haddii aad heshay kaarka boostada, hubi inaad ku gasho boggaaga astaanta ganacsi.google.com oo qor lambarkaaga xaqiijinta. Mar labaad, tan laguma dabaqi karo kiisaska oo dhan.
Wax ka habeynta xogtaada ganacsi ee Google
Hawl ganacsi yar waa hawl adag. Ku darista hawl kale liistadaada waxqabadka ma fiicna, laakiin maskaxda ku hay in, ka sokow dukaankaaga, astaanta ganacsigaaga Google ay tahay wejiga aad u soo bandhigtay macaamiisha mustaqbalka.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaan kugula talineynaa inaad naftaada u dhigto xusuusin (ugu yaraan bille ah laakiin ugu habboon usbuuc walba) si aad u hubiso oo aad u cusbooneysiiso astaantaada Google si joogto ah. Hubso in dhammaan macluumaadkaaga ganacsi ay sax yihiin, hubi oo ka jawaab dib-u-eegista, samee qoraallo, kuna dar sawirro. Faahfaahin firfircoon oo casriyeysan ayaa u soo jiidasho badan macaamiisha suurtagalka ah ee kugula kulmaya Google.
Ku cusbooneysiinta macluumaadkaaga Google My Business
Aynu eegno macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan astaanteenna oo aan aragno haddii ay jiraan wax cusbooneysiin ah ama ku daris ah oo ay tahay in lagu daro. Dhagsii xiriirka "Info" ee dhinaca bidix ee bidix si aad macluumaadkaaga kor ugu soo qaaddo.
Gaar ahaan muhiim u ah ganacsiyada bixiya gaarsiinta ama adeegyada ka baxsan meesha ugu muhiimsan, waxaad dooran kartaa meelaha aad u adeegayso. Xaqiiqdii, waad ku dari kartaa ilaa lix iyo toban goobood oo adeeg ah.
Aynu nidhaahno in South Side Snack Shop uu go'aansaday inuu u gudbiyo macaamiisha. Waxaan sii hayn doonnaa aagteenna bixinta oo ku koobnaan doonta aagga Greater Dutchtown, sidaa darteed waxaan ku darnay Dutchtown, Mount Pleasant, Marine Villa, iyo Gravois Park. Dhawaan, markay dadku ka raadsadaan “Bakhaarka ku habboon Gravois Park,” dukaankeennu waa la taxi doonaa.
Tusaalaheena ayaa si gaar ah ugu kooban xaafada. Haddii meheraddaadu ay adeegyo ka bixiso guud ahaan aagga Metro St. Louis, waxaad u baahan doontaa inaad doorato goobo adeegyo ballaadhan - St. Louis, Maplewood, Affton, Jaamacadda Magaalada, iyo wixii la mid ah. Mar labaad, waxaad dooran kartaa ilaa lix iyo toban aag, oo haddii aad u adeegto aagga metro guud ahaan, waa inaad isticmaashaa dhammaan lix iyo tobanka boos.
Google My Business wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto dhowr sifooyin gaar ah astaantaada ganacsi. Hoos ugu yara rog boga macluumaadka waxaadna arki doontaa qayb ku suntan "Ka ganacsiga." Halkan waxaad ku dari kartaa macluumaad kusaabsan taxaddarrada caafimaadka iyo amniga ee aad qaadatid, adeegyada aad bixiso, hababka lacag bixinta ee aad aqbasho, iyo inbadan. Aynu ku darno qaar ka mid ah astaamahan.
Laga bilaabo xagga sare, waxaan ku dari karnaa astaamo lagu garto meheraddeenna - Madow baa iska leh, dumar ayaa hoggaaminaya, ama halyeey leh. Dadku waxaa laga yaabaa inay si gaar ah u raadinayaan ganacsiyada noocan ah, iyo tilmaamahan ayaa kaa caawin doona inaad istaagto. (Dhanka kale, waxaan sidoo kale leenahay a Liiska meheradaha Madow ku leeyihiin Dutchtown).
Hoos u rogista, waxaad u ogeysiin kartaa baarayaashu inay ka ogaadaan marin u helida kursiga curyaamiinta ee meheraddaada, haddii aad leedahay musqulo dadweyne, ama haddii aad macaamiil u siiso internet wireless ah.
Gaar ahaan inta lagu jiro waqtiga COVID-19, macaamiisha suurtogalka ah waxay rabaan inay ogaadaan nooca taxaddarrada amniga ee ganacsigaagu qaadanayo. Xulo mid kasta iyo wixii ku habboon. Qoraalkan, Magaalada St.Louis wali waxay kujirtaa amar maaskara ah, sidaa darteed hubi inaad hubiso “Maaskaro loo baahan yahay” iyo “Shaashaduhu maaskaro ayey xidhaan” (oo hubi inaad maaskaro xiran tahay!).
Hoos u sii dhig, waxaad qori kartaa noocyada lacag bixinta ee aad aqbasho. Haddii aad kaliya qaadato lacag caddaan ah, sax sanduuqa "Lacag kaliya", laakiin haddii aad aqbasho lacagaha kale, ka tag sanduuqa "Lacagta kaliya" oo aan la hubin. Haysashada "Lacag caddaan ah oo keliya" iyo xulashooyinka kale ee la xulay waxay marin habaabin ama jahwareer gelin kartaa macaamiisha.
Ugu dambayntiina, waxaannu haysannaa xulashooyin adeeg Sidii aan soo sheegnay, dukaankeenna tusaalaha ahi wuxuu bilaabay bixinta, markaa waxaan hubin doonnaa inaan ku darno adeeggaas halkan. Waxaad dooran kartaa tiro kale oo xulashooyin ah markay khuseeyaan meheraddaada.
Saacado Badan Iyo Saacado Gaar Ah
Google wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka inaad ku darto saacado dheeri ah oo gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaad bixiso saacado qaadis gaar ah, ama makhaayadaadu waxay bixisaa brunch weekend. Dhagsii badhanka wax ka beddelka "Saacado badan" waxaadna ku dari kartaa dhowr qaybood oo ah saacado adeeg dheeri ah. Tusaalaheenna, waxaan ku dari doonnaa Arbacada saacad faraxsan-2 loogu talagalay 1 soodhada!
Waxa kale oo aad ku dari kartaa saacado gaar ah waxyaabaha sida ciidaha ama waqtiyada kale ee laga yaabo inaad furnaato ama xidho saacadaha aan caadiga ahayn. Iyada oo ay soo dhowdahay Easter wakhtiga qorista, Google waxay soo jeedineysaa inaan xaqiijino saacadaheena Easter. Haddii aad qorsheyneyso inaad furnaato ciidaha qaarkood, xaqiijinta saacadahaagu waa hab fiican oo lagaa badbaadin karo koox ka mid ah kuwa “ma furan tahay?” taleefanno.
Laakiin kuma koobna kaliya ciidaha. Tusaalaheena, waxaan dhihi doonaa waan xirnaa Arbacada soo socota. Waxaan sidoo kale ku dari doonaa cusbooneysiin aan ku furan nahay saacado dheeri ah Jimcaha.
Dalbo Amar ama Ballan samee
Haddii ganacsigaagu aqbalo amarrada khadka tooska ah, waxaad ku dari kartaa xiriiriye dukaankaaga internetka halkan. Macaamiisha waxay awoodi doonaan inay si toos ah uga baxaan raadinta Google si ay amar kuu siiyaan.
Waxay kuxirantahay nooca ganacsi ee aad shaqeyso, waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad ku darto xiriiriye ballan. Muuqaalka ballantu wuxuu si gaar ah ugu fiican yahay bixiyeyaasha adeegga sida timo-jareyaasha iyo timo-jareyaasha. Ku xir adeeg sida Buugga or StyleSeat oo ha u daayaan inay taxadaraan ballansashada ballamahaaga.
Haysashada Faahfaahinta Ganacsiga Google cusub
Marka laga soo tago aasaasida astaantaada macluumaadkaaga oo aad cusbooneysiiso, Google My Business waxay ku siineysaa habab aad adigu uga ilaalin karto macaamiisha cusub iyo kuwa jiraba. Tusaale ahaan, waad ka faa’iideysan kartaa Qoraalada — oo la mid ah baloog — si aad macaamiisha ugu ogeysiiso waxyaabaha ku cusub, dhacdooyinka gaarka ah, ama wax kasta oo kale oo ku dhacaya ganacsigaaga.
Aynu abuurno boosteejo dalab gaar ah leh. Ka xulo “Kudar Bixin” baarka dusha sare ee shaashadda Posts. Waxaa lagaa dalban doonaa inaad ku darto cinwaan, soo bandhig taariikho, iyo sawirro. Waad ku dari kartaa ilaa toban sawir dalab kasta, waxaanan kugu dhiirigelinaynaa inaad dhowr ku darto haddii aad sidaas sameyso wax macno u leh boostadaada. Waxa kale oo aad ku dari kartaa faahfaahin dheeraad ah sida sharaxaadda ama lambarrada kuuban, laakiin tani waa ikhtiyaari. Dhagsii badhanka Daabacaadda boostaduna waxay toos ugu noolaan doontaa dhammaan macaamiishaadu inay arkaan.
Aan isku dayno qoraal kale. Markan waxaan sameyn doonaa cusbooneysiin guud. Nooca boostada cusbooneysiintu wuu ka yar yahay noocyada kale ee qoraallada, sidaas darteed waa hab fiican oo dadka si fudud loogu xusuusiyo ganacsigaaga. Mar labaad, waxaad ku dari kartaa dhowr sawir. Kadib waxaad qori doontaa qoraalkaaga. Dheeraad iyo sharraxaad badan ayaa ka fiican, laakiin wax waliba way qaban doonaan. Ugu dambeyntii, waxaa lagu siin doonaa ikhtiyaarka inaad ku darto badhan. Shaqada badhanka waa la beddeli karaa. Xulashada badhanka waxaa ka mid ah in la dhigo taleefan, laga dalbado khadka tooska ah, ama inbadan oo laga barto. Waxaan dooranay xulashada “Waxbadan Ka Baro”, taas oo noo oggolaaneysa inaan ku darno xiriiriye dib ugu noqda degelkeenna.
Waad ku tijaabin kartaa noocyada kale ee boostada sida aad u aragto habboon. Kudar alaabo, sii cusbooneysiinta faafa, abuur dhacdooyin, macaamiishana ku mashquul.
Mar kasta oo aad daabacdo qoraal, waxaad yeelan doontaa awood aad kula wadaagto qoraalkaas adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada iyo emaylka. Haddii aad leedahay macmiil jira oo kaa raacaya warbaahinta bulshada, tani waa hab fudud oo ereyga looga helo meheraddaada. (Haddii ganacsigaagu uusan weli ku jirin baraha bulshada, waxaan dhowaan kuu heli doonnaa hage kale)
Si aad ula wadaagto qoraalkaaga, dhagsii xiriirka "Share post" ee ka hooseeya boostadaada. Laga soo bilaabo pop-up-ka, waxaad markaa si toos ah ula wadaagi kartaa Facebook, Twitter, ama emayl, ama waad nuqulan kartaa xiriiriyaha oo aad la wadaagi kartaa sida aad jeceshahay.
Ha iloobin Sawirada
Sawirada si gooni ah ayaa loo maareeyaa qoraalada. Laakiin wali waad wadi kartaa kaqeybgalka adoo kudaraya sawiro cusub si joogto ah, waana hab dhaqso badan oo aan ubaahnayn fikir badan ama tamar badan. Tag xiriiriyaha Sawirada dhinaca bidix ee bidix, ka dibna riix batoonka buluuga + ee ku yaal geeska midig ee kore.
Kudar sawirrada alaabtaada cusub, gudaha iyo dibedda meheraddaada, ama waxkastoo kale. Waad ku dari kartaa fiidiyowyo sidoo kale. Kaliya jiid oo hoos u dhig si aad ugu darto sawiradaada.
Halkii aad ku dari lahayd sawirada wax soo saarka sawiradaada guud, waad ku dari kartaa iyaga si gooni ah alaab ahaan. Macaamiisha wali way arki doonaan sawirada, laakiin waxaad ku dari kartaa macluumaad dheeri ah sida magaca sheyga, sharaxaad, nooca, iyo qiimaha. Waad gali kartaa kuna dari kartaa badeecadaada adoo adeegsanaya iskuxirka alaabta ee ku yaal menuka bidix.
Dib u eegista Google ayaa loo sameeyaa ama loo jabiyaa ganacsiyo badan. Qaar badan oo ka mid ah baarayayaasha iyo macaamiisha mustaqbalka waxay toos ugu aadi doonaan dib u eegista si ay u arkaan waxa meheraddaadu saxdo - iyo waxa ay khaldan tahay. Inta badan ee dib u eegista wanaagsan ee aad ku hayso Google, ayay u badan tahay inuu macaamil macquul ahi yimaado ganacsigaaga.
Kama hor istaagi kartid qofna inuu ka tago dib u eegis (mid togan ama mid taban), laakiin waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad sameyn kartid si aad u maamusho dib u eegistaada.
Weydiiso dib u eegis
Ma jiraan wax khalad ah oo weydiinaya macaamiishaada inay kuu daayaan dib u eegis. Xaqiiqdii, Google ayaa kugu dhiirrigelineysa inaad sidaas sameyso. Si edeb leh ayaad si toos ah u weydiisan kartaa macaamiisha inay ka baxaan dib u eegista, ama waxaad ku dari kartaa kaarka ogeysiiska ama xusuusin ah rasiid ku dhiirrigelinaya macaamiishaada inay ka baxaan dib u eegista. Weydiinta macaamiishaada joogtada ah inay ku daraan dib-u-eegis ayaa kaa caawin doonta inaad kor u qaado qiimeyntaada.
Hadday dib-u-eegista aad heshay ay fiicnayd ama ay xumaatay, daqiiqad qaado si aad uga jawaabto-in kasta oo haddii aanad sheegi karin wax wanaagsan, ka fiirso inaadan waxba ka odhan haba yaraatee. Dib u eegista wanaagsan, mahadsanid fudud ayaa kugu filnaan doonta.
Haddii ay dhacdo inaad hesho wax ka yar dib-u-eegista xiddigta, soo bandhig jawaab aqoonsanaysa faallooyinka faallooyinka oo muujineysa hagaajinta aad sameyn kartid si aad u horumariso khibradooda. Dadka akhriya faallooyinkaaga waxay arki doonaan inaad ku hawlan tahay oo aad ka go'an tahay inaad bixiso khibrad wanaagsan. Qofka ka tagay dib u eegista xun ee bilowga ah xitaa waxaa lagu dhiirigelin karaa inuu markale soo booqdo oo uu dib u habeyn ku sameeyo dib u eegistooda goor dambe.
Halkaas Ka Sii Wad!
Xusuusnow, maaraynta astaantaada ganacsi 'Google My Business' ma aha oo keliya hawl hal mar ah. Si joogto ah ula soco si aad u xaqiijiso macluumaadkaaga, aad ugu darto waxyaabo cusub, una maamusho dib u eegistaada. Hadaad wali ubaahantahay caawimaad dejinta astaantaada ganacsi, nala soo xiriir waana isku dayi karnaa inaan ku caawino. Waxa kale oo aad ka fiirsan kartaa inaad la xiriirto milkiileyaasha ganacsiyada kale adoo adeegsanaya bartayada Milkiilayaasha Ganacsatada Dutchtown kooxda Facebook.
La soco hagayaal badan oo kaa caawinaya macaamiisha inay ka helaan internetka meheraddaada. Mawduucyada la qorsheeyay waxaa ka mid ah sameynta bogga Facebook ee ganacsigaaga iyo dhisidda degel fudud ama dukaan internetka ah. Tilmaamahani waxay qayb ka yihiin dadaalkeena taageer ganacsiyada Dutchtown leh ilo iyo macluumaad. Haddii ay jiraan wax aad jeclaan lahayd inaad ku aragto hagayaashayada, Aan ogaano.
DutchtownSTL.org Taageerida Ganacsiyadeena Dutchtown Google My Business Qaybta Labaad: Tilmaamaha Dutchtown ee Ganacsiyada